Yambiro Tape Series Factory - China Yambiro Tape Series Vagadziri, Vatengesi
Anti-Slip PVC chengetedzo tepi
Anti-slip tepi inogadzirwa yakaoma uye inogara yakasimba carbonized silicon particles. Izvi zvidimbu zvinoiswa pane yakasimba-simba, muchinjikwa-unobatanidza, inodzivirira mamiriro ekunze epurasitiki mafirimu, uye ndicho chimwe chezvinhu zvakaomesesa zvinozivikanwa kusvika nhasi.
Isiri-inonamira PE yambiro tepi
Kazhinji inoshandiswa kupatsanurwa kwemajenya ekuvaka, mijenya ine njodzi, tsaona dzemumigwagwa uye emergency. Uye iyo fenzi yemagetsi ekugadzirisa magetsi, nzira yemigwagwa, kuchengetedza kwezvakatipoteredza mainjiniya.
Chipingamupinyi Yambiro tepi ine zvakanakira isinga pinde mvura, hunyoro-humbowo, anti-ngura, anti-static, nezvimwewo Inokodzera kudzivirira kweyeyi yepombi dzepasi pevhu senge pombi dzemhepo, pombi dzemvura, mapaipi emafuta zvichingodaro. Mavara-maviri tepi anogona kushandiswa kune anonyevera zviratidzo pasi, makoramu, zvivakwa, traffic nedzimwe nzvimbo.
Pe yambiro tepi
Uchishandisa yakanakisa PE zvinhu, yakajeka ruvara. Inoshandiswa zvakanyanya kune-pa-saiti yambiro uye kupatsanurwa kweanokurumidzira kana nzvimbo dzekuvakisa nenzvimbo dzine njodzi.
PVC chipingamupinyi yambiro tepi
Chipingamupinyi Yambiro tepi inonzi zvakare tepi yekuzivisa, tepi yepasi, tepi yepasi, tepi yechiratidzo, etc.Iyo tepi yakagadzirwa nePVC firimu uye yakaputirwa nerabha yekumanikidza inonamira.